नयाँ वर्षमा मोटरसाइकल किन्दै हुनुहुन्छ? यस्ता छन् छुट तथा उपहार – Aarthik Samachar
नयाँ वर्षमा मोटरसाइकल किन्दै हुनुहुन्छ? यस्ता छन् छुट तथा उपहार
लोकप्रियता र प्रतिस्पर्धा बढेसँगै कम्पनीहरुले पनि ग्राहक आकर्षण गर्न चाडपर्व तथा विशेष दिनहरुको अवसर पारेर बिभिन्न छुट, सुविधा तथा योजनाहरु ल्याउने गरेका छन्।
अहिले पनि बजारमा ग्राहकलाई सुविधा दिन कम्पनीहरुको होडबाजी लागेको छ। नयाँ वर्ष २०७४ आउँदै गर्दा ग्राहकले अन्य समयमाभन्दा केही छुट तथा उपहारसहित मोटरसाइकल किन्ने मौका पाएका छन्।
सुजुकी मोटरसाइकलको लागि आधिकारीक विक्रेता भिजि अटोमोबाइल्स प्रालीले पनि नयाँ वर्षको अवसरमा अफ्ना ग्राहकहरुलाई उपहारको योजना ल्याएको छ। यो योजना अन्तर्गत सुजुकीका मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्नेले सामसुङ २३ इन्चको एलइडी टेलिभिजन प्राप्त गर्ने कम्पनीका मार्केटिङ म्यानेजर प्रतिक घिमिरेले जानकारी दिए।